> Resource > Video > DVR-MS Editor: Sida loo Edit DVR-MS Files fudud oo degdeg badan
Waxay rabaan inay wada xaalkaa cajalado DVR sida ay ka saareen xayaysiisyada ama ku milmaan qaar ka mid clips gaaban si ay u abuuraan show oo dhan? Waa hagaag, tan iyo DVR MS waa qaab Microsoft ah, waa in aynan ugu barnaamijyada video tafatirka marka laga reebo Windows Movie abuuray. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad raadineyso weeyna ka sii xoog badan oo deggan DVR MS video editor ah, siin Wondershare Video Editor isku day ah. Waa video tafatirka barnaamijka orodka xirfadle in Windows 8/7 / XP / Vista kugu caawiya inaad la abuuro movie guriga xirfadeed oo ku yaalla daqiiqo. Hoos waxaan describle doonaa sida loo sameeyo.
Free download DVR-MS maxkamad editor version:
1 files Import DVR-MS
Guji "Import" xitaa folder file iyo dar qabtay files DVR-MS aad galay suuqa kala barnaamijka. Marka aad si guul leh ku shuban iyaga oo dhan, jiididda iyo iyaga iska Timeline video ah. Waxay muuqan la biireen doonaa.
Haddii loo baahdo, waxaad u habayn kartaa clips ku saabsan waqtiga adigoo gujinaya wax clip DVR-MS, haysta button mouse hoos u soo jiiday tagay ama midig ee waqtiga. Ku baryayaaye, ha ku dahaadhaa galay clip kale, haddii ay dhacdo in aad u baahan tahay si ay u kala qaybsan tahay.
2 Goo DVR-MS videos fudayd
Si aad u gooyaa qayb ka mid ah DVR clip ka soo baxay oo waqtiga, dhaqaajiyaan goorsheegta akhriyo dhibic qaybta aad rabto in aad ka jareen. Ka dibna riix icon Sissor in ay iska jar iska riix "Delete" fure aad keyboard.
3 Codso kala guurka iyo saamaynta in DVR-MS videos
Codso kala guurka iyo saamaynta waa mid aad u fudud ula this DVR-MS video editor . Marka la eego 300+ foom oo lacag la'aan ah, waxaad si fudud u qaadan kartaa mid aad ugu jeceshahay in aad dalbato in aad DVR-MS videos. Si ay iyaga ugu dalban, kaliya jiidi kala guurka ama saameyn aad u baahan tahay iyo hoos u dhexeeya clips DVR-MS in Timeline ah. Waxa kale oo aad sii astaysto, tusaale ahaan waqti ka mid ah inta lagu,
Wixii saamaynta sare sida Jump Goo, Close-up, Muuse, iyo Face-off, wuxuu kuu diri karaa in this faahfaahsan Guide User .
4 dhoofinta DVR-MS file cusub
Si loo badbaadiyo saxar files DVR MS aad, fadlan guji "Abuur". In daaqadaha in furay, waxaad dooran kartaa qaab caan video sida MP4, MOV, wmv ama qaybiyay horena qalab inay u dhoofiyaan abuurkiinna.
Ma doonaysaa in ay geliyaan gal YouTube, Facebook lagu wadaago? Ama gubi aad masterpiece in DVD ah ee mudada dheer ilaalinteedu? Just tago ee ku aadan ikhtiyaarka. Ka dib markii in, ku dhacay Abuur iyo aad samaysay.
Fiiri hoos video tutorial ku saabsan sida loo edit files DVR-MS talaabo talaabo ah:
DVD gubay ayaan ciyaari doonin DVD Player? Xalliyo.
Sony Vegas u Mac: Edit Videos ee Mac OS